Efa manana olon-tiana izy …fa tiako
Tranga matetika miseho ny hoe : efa manana olon-tiana hafa ny olona iarahana. Marobe ny tovovavy miaina izany.
Misy no efa nahalala ny toe-java-misy, saingy niditra ihany, satria nihevitra fa ho afaka mandresy lahatra azy handao ilay efa tompon-toerana. Misy koa ireo efa tao anatiny sy efa latsa-pitia vao nahafantatra. Ny olana iraisan’izy ireo dia samy lasa mihafihafy. Inona ny atao raha sendra izany ?
Tsy maintsy miafina
Raha miaraka amin’olona efa manan-tompo dia marobe ny tsy azo atao : tsy mahazo mifampitantana eny an-dalana, safidifidiana be ny toerana handehanana sao dia misy olona mahafantatra. Voafetra be koa ny fotoana hiarahana ary tsy afaka ny hisitraka an-kalalahana ny fitiavan’ilay olon-tiana satria mizara ny fandaharam-potoanany sy ny fitiavany. Na ny ora azo hiantsoana sy handefasana someso ho azy aza dia voafetra ihany. Mety efa nilaza izy fa tsy mety mihitsy ny fiarahan’izy ireo, saingy toa tsy isarahany akory anefa io niarahany voalohany io. Mety nilaza taminao koa izy fa ianao no tena tiany, nefa dia tsy maintsy hahita antony tsy hahafahany misaraka aminy foana izy.
Raha ianao no amin’ny toerana ?
Maro, vokatr’izany, no leo an’ilay fiarahana sy mahatsiaro ho mijaly. Diniho anefa fa ianao izany no antony handaingany amin’io olon-tiany io. Hevero, noho izany, ny mety ho fihetseham-pon’ilay miaraka aminy, raha fantany fa mampirafy azy ny olon-tiany. Fa indrindra hevero, raha ianao no ilay tena tompon-toerana, nefa itsakitsahina tahaka izany. Tsy misy vehivavy te hiaina izany kosa angamba.
Ny hany vahaolana dia ny miresaka amin’ilay olon-tiana. Tokony ajanona ny fiarahana miafina. Tokony hisafidy izy, na ianao na ilay efa miaraka aminy ihany no hiarahany. Raha toa moa ka ianao no nosafidiany dia ianao izany no tena tiany. Raha tsy mahavita misafidy izy, na ilay iray no nosafidiany fa tsy ianao, dia ekeo ny fanapahan-keviny ary tsofy rano izy. Tsy natao ho anao izy izany. Ho mafy tokoa ny hisaraka aminy, indrindra raha efa lalim-paka ny fihetseham-ponao, saingy tadidio fa ny toerana voalohany sady tokana ihany no mendrika anao. Tsy hahita ilay lehilahy hanome anao izay anjara toerana izay mihitsy ianao, raha mbola miharitra miaraka aminy ihany.